ကိုယ့် ကိုယ်ထဲမှာ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ရှိမရှိ စစ်ဆေးစမ်းသပ်နည်း | မာသင်
ကိုယ့် ကိုယ်ထဲမှာ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ရှိမရှိ စစ်ဆေးစမ်းသပ်နည်း
အားလုံးသိပြီးသားပါ။ အင်္ဂလိပ်အခေါ် Vampire လို့ခေါ်တဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် ဆိုတာ သူတို့နဲ့တွေ့သမျှလူကို သွေးစုပ်ပြီး အားအင်ချိ့နဲ့စေတဲ့အကောင်ပေါ့။
မြန်မာပြည်မှာ ခေါ်တာက ဖုတ်ဝင်တာပေါ့။ အညာမှာ ထန်းပင်ပေါ်က ပြုတ်ကျပြီး မသေပဲ ရုတ်တရုတ်ဖုတ်ကနဲ ပြန်ထ။ လာကူပြီး ထမ်းပေးတဲ့လူတွေဆီက အားအင်တွေကို စုပ်ယူ၊ ညသန်းခေါင် ဆိုရင် အိမ်သူအိမ်သားတွေ မသိအောင် တိတ်တစိတ်ထပြီး ထမင်းတွေစား၊ အိမ်မှာရှိသမျှ ထမင်းအိုးတွေပြောင်နေအောင်စားလိုက်တော့ အိမ်သူအိမ်သားတွေ မနက်ကျ ထမင်းငတ်၊ဟင်းငတ်ဖြစ်ကြကုန်ရော။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာ ဖုတ်ကောင်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီဖုတ်ကောင်နဲ့တူတဲ့အရာတွေအကြောင်းပါ။
ယနေ့ခေတ်ရဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေက …..ဘာတွေလဲ ?
ကိုယ့်အချိန်တွေ၊ အားအင်တွေကို ကုန်ဆုံးစေတဲ့အရာ။
ညနက်သန်းခေါင်ထိ မအိပ်နိုင်ပဲ ကိုယ့်အတွက်လဲအကျိုးမရှိ၊အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်၊မနက်ကျတော့ အိပ်ရေးပျက်ထားတော့ လူပန်း၊နွမ်းနယ်။ ကြာလာတော့ သွေးစုပ်ခံထားရသလို ဖြူဖတ်ဖြူရော်ဖြစ်ကုန်ရော။
facebook ကြည့်တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်များများကြည့်ဖြစ်တဲ့အရာက..ကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်စေမယ့် စာတွေဖတ်ပြီး၊ စိတ်ဓာတ်အားအင်ဖြစ်စေမယ့် အရာတွေကို နားထောင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်ကိုလဲအားအင်ယုတ်လျော့စေတယ်။ လူမဆန်တဲ့အရာတွေ၊ အဌိဒါရုံတွေပဲ ကြည့်ဖြစ်တော့ လောကကြီးအပေါ်မြင်တဲ့အမြင်တွေက ပြောင်းလဲလာတယ်။
စိတ်ဓတ်ခွန်အားမဖြစ်စေပဲစိတ်ဓတ်ကျဆင်းမှုတွေကိုသာဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုရင်၊ အချိန်ကုန်၊ငွေကုန်၊လူပန်း ဆိုရင်တော့ သွေးစုပ်တာခံနေရပြီ။
အရာတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီး သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် ဟုတ်၊မဟုတ် လို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ အဲဒီအရာကို ကိုယ်လုပ်တဲ့အပြုအမှု ပေါ်မှာမူတည်ပြီး ဟုတ်ခြင်း မဟုတ်ခြင်း ဆိုတာပြောလို့ရပါတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်ကို စမ်းစစ်လေ့လာပါ။ နေ့စဉ် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အရာတွေထဲမှာ ဘယ်အရာတွေက သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေလဲ။
စစ်ဆေးခြင်း အချက် (၂ ) ချက်
၁) ကိုယ့်ရဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေက ဘယ်အရာတွေလဲ ?
၂) ကိုယ့်ကိုယ်ထဲဝင်နေတဲ့အဲဒီဖုတ်ကောင်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့သုတ်သင်သတ်ပစ်မလဲ?
အခြားစာဖတ်သူများ လေ့လာအတုယူနိုင်အောင် စိတ်ကြိုက်လွတ်လပ်စွာ မန့်ခဲ့ပါ။